दुर्इ रियालिटी ‘शो’ ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ र ‘नेपाल आइडल–२’ बीच रोमाञ्चक भिडन्त, जनतामा कसको क्रेज कति ? – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainmentदुर्इ रियालिटी ‘शो’ ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ र ‘नेपाल आइडल–२’ बीच रोमाञ्चक भिडन्त, जनतामा कसको क्रेज कति ?
August 29, 2018 sutraentertainment Entertainment, Event, Feature News 0
नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरुबाट प्रसारण हुने रियालिटि ‘शो’ हरु मध्ये गत साल ‘नेपाल आइडल’ को पहिलो सिजनले निकै चर्चा कमाउन सफल भयो । चर्चासँगै विभिन्न कारणले पहिलो सिजन केही विवादित पनि नदेखिएको होइन । एपीवान टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको पहिलो सिजनको कार्यक्रममा निर्णायकहरुको ‘पर्फमेन्स’ तथा अन्तिम चरणका भोटिङका कारण पनि नेपाल आइडलको पहिलो सिजन विवादरहित बन्न सकेन । त्यो भन्दा पनि थप विवादित त त्यतिबेला भयो जुनबेला कतारबाट गरिएको ‘ग्राण्ड फिनाले’ प्राविधिक कारणले नेपालमा रहको दर्शकले प्रत्यक्ष हेर्न पाएनन् । सम्पूर्ण नेपाली दर्शकहरु नेपाल आइडलको आयोजकप्रति खनिन पुगे । त्यस्तै, फाइनल कतारमा आयोजना गरिएको बिषयमा पनि कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा ‘नेपाल आइडल’ नभनेर ‘कतार आइडल’ भन्नुपर्ने भनेर टिप्पणी समेत गरेको पाईयो । कतारमा आयोजना गरिएको फाइनलमा गतिलो व्यवस्थापन हुन नसक्दा कतारको कार्यक्रम पनि आलोचना मुक्त हुन सकेन । कतारमा रहेका धेरै नेपालीले टिकट काटेर पनि कार्यक्रम हेर्न नपाउदा आक्रोश समेत व्यक्त गरेका थिए । पछिल्लो समयमा नेपाल आइडलका ‘विनर’ बुद्ध लामाले दिएका विवादास्पद अभिव्यक्तिले नेपाल आइडलको पहिलो सिजन थप विवादित देखियो । तर, समग्रमा जे जस्तो भए पनि नेपाल आइडल गीत गाएर आफ्नो भविष्य बनाउन चाहानेहरुका लागि निकै गतिलो र उपयुक्त प्लेटफर्म हो भन्ने कुरा भने पुष्टि भएको छ ।
जस्तो, नेपाल आइडलको अन्तिम तीनसम्म परेका प्रताप दास, निशान भट्टराई तथा बुद्ध लामा त यतिबेला बेफुर्सदी गायक जस्तै बनेका छन् भने त्यो बाहेक अन्य प्रतिस्पर्धी समेत यतबेला राम्रै बिकेको देख्न सकिन्छ । त्यसैले, यतिबेला सर्वत्र हेर्न र सुन्न सकिन्छ यस्ता रियालिटी ‘शो’ हरुले गाँउका कुनाकाप्चामा लुकेका प्रतिभाहरुलाई प्रस्फुटित गर्ने सुनौलो मौका दिन सफल भएका छन् । सायद त्यही भएर होला फेरि लगभग महिनादिन अघि (साउन २४) देखि नेपाल आइडलको दोस्रो सिजन एपीवान टेलिभिजनबाट सुरु भएको छ । इन्टरनेशनल फ्रान्चाइज सिङ्गिङ रियालिटी शो प्रथम संस्करणको सफलतापछि नेपाली दर्शकहरुमाझ् यसको दोश्रो संस्करण ‘नेपाल आइडल टु’ एपीवान एचडी टेलिभिजनबाट प्रसारणमा आएको हो ।
बिहीबार र शुक्रबार राति साढे आठ बजे प्रसारण हुँदै आएको यो रियालिटी शोमा पनि पहिले जस्तै न्हयू बज्राचार्य, कालीप्रसाद बास्कोटा र इन्दिरा जोशी नै निर्णायक रहेका छन् । कार्यक्रमको प्रस्तोतामा भने गतसाल जस्तै रिमा विश्वकर्मा दोहोरिए पनि गत सालका शुशिल नेपाल भने देखिएका छैनन् । उनको सट्टामा नयाँ अनुहार, टेलिभिजन कार्यक्रम निर्माता, गायक तथा अभिनेता आसिफ शाह देखिएका छन् । गत बर्ष बुद्ध लामा पहिलो बन्दा निशान भट्टराई र प्रताप दास दोश्रो र तेश्रो बन्न सफल भएका थिए । नेपाल आइडलमा प्रथम, दोश्रो र तेश्रो स्थान प्रप्त गर्न सफलहरुले देश विदेशका विभिन्न मञ्चहरुमा प्रस्तुती दिँदै ख्याती कमाएका छन् । यो पटक पनि ‘मन जित्छ उसले, सुमधुर गाउँछ जसले’ भन्ने मूल नाराकासाथ अडिसन राउन्डका कार्यक्रम प्रसारण गर्दै नेपाल आइडल सिजन टु सुरु भएको छ । सिजन टु का विजेताले २० लाख नगद, एउटा होन्डा डब्लुआर–भी कार, एउटा एल्बमको सम्झौता र विश्वभ्रमण अथवा ५० लाख नगद, एउटा एलबमको सम्झौता र विश्व भ्रमणमध्ये एक छनोट गर्न पाउने छन् ।
त्यस्तै, यति नै बेला नेपालमा अर्को रियालिटी ‘शो’ पनि सुरु भएको छ । यो पटक सिङ्गिङ रियालिटि ‘शो’ मा नेपाल आइडल मात्रै एक्लो छैन । गत शनिबार देखि अर्को गायन प्रतियोगिता ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ पनि सुरु भएको छ । दुई एपिसोड मात्रै प्रसारण हुँदा पनि ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ लाई दर्शकले अत्यन्तै मन पराएका छन् । यो नेपालको युट्युब ट्रेनडिंग अन्तरगत एक नम्बरमा समेत आइसकेको छ । हुन त नेपाल आइडल पनि युट्युब ट्रेनडिंगमा नम्बर एकमा नआएको होइन । तर, तुलनात्मक रुपमा नेपाल आइडल भन्दा ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ ले भिओर्स धेरै पाएको भने पक्कै छ । कान्तिपुर टेलिभिजनबाट हरेक शनिबार र आइतबार राति ९ बजे प्रसारण भैरहेको ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ नेपाल आइडलबाट अलग्गिएर आएको टिमले सुरु गरेको हो ।
जसले गतबर्ष नेपाल आइडलको पहिलो सिजन सञ्चालन गरेको थियो । विश्वका १९२ भन्दा बढी सफल प्रसारण भएको यो प्रतियोगिता नेपालमा अत्याधिक मन पराउने आयोजकले विश्वास लिएको छ । यो नेपाल आइडल भन्दा केही भिन्न र आकर्षक समेत देखिएको छ । यसमा मोबाइल एफ मार्फत समेत डिजिटल अडिसन छानिएका प्रतिस्पर्धीहरु सहभागी हुने छन् । पहिलो र दोस्रो भागमा सहभागी सबैले राम्रो प्रस्तुति दिएका थिए । ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’को टाइटल विजेताले २५ लाख नगदसहित ब्राण्डेड कार, २० लाखको म्युजिक एल्बम कन्ट्रयाक्ट र वर्ल्ड टुर अवसर हात पार्ने बताईएको छ । पहिलो ब्लन्ट अडिसन हुनेछ, जहाँ जजहरुको अगाडि प्रतियोगीले आफ्नो प्रस्तूति दिने छन् ।
जजहरुले प्रतिस्पर्धीलाई मन पराए अफ्नो रोटेटिङ चेयरमा राखेको बटम थिचेर ‘आइ वान्ट यू’ भनेर आफ्नो समर्थन गरेपछि प्रतिस्पर्धीले आफूले मन परेको कोच छानेर ग्रुपमा सामेल हुनुपर्ने छ । त्यो मध्यले एक जना विजेता हुनेछ । ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ ब्लाइन्ड अडिसन पछि बाहिरिएका सहभागीहरुसँग द भ्वाइस अफ नेपालको अफिसियल फेसबुक पेजमा लाइभ अन्तरवार्ता समेत गर्नेछ । गत साल नेपाल आइडलको निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका लक्ष्मण पौडेल यतिबेला ‘द भ्वाइस अफ नेपालको निर्देशक बनेका छन् । गत साल रीमासँगै कार्यक्रम होष्ट गरेका शुशिल नेपाल अहिले ‘द भ्वाइस अफ’ नेपालको होष्टका रुपमा देखिएका छन् ।
त्यस्तै, ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ को जजहरुमा दिप श्रेष्ठ, प्रमोद खरेल, सनुप पौडेल र अभया सुब्बा रहेका छन् । यतिबेला लगभग सँगसँगै सुरु भएका दुईवटा रियालिटि शोलाई जनस्तरबाट तुलनात्मक रुपमा हेर्न थालेको पाईन्छ । वास्तवमा दुबै शोका आ–आफ्नो महत्व त छ नै । तैपनि, जजहरुको प्रस्तुति र स्टेजका कारणले ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ को चर्चा अलि फरक पाउन सकिन्छ । स्टेज निर्माणमा पनि अधिक खर्च गरेकाले होला नेपाल आइडलको स्टेजको तुलनामा द भ्वाइस अफ नेपालको स्टेज निकै आकर्षक देखिएको छ । नेपाल आइडलमा निर्णयकहरुले दिने प्रतिक्रिया उही पुरानो तरिकाको तथा द भ्वाइस अफ नेपालमा निर्णायहरुको प्रतिक्रियाको प्रस्तुति अलि फरक खालको भएकाले मानिसहरुले त्यो नयाँ चिजलाई अलि बढी महत्व दिएको समेत देखिन्छ ।
आजभोलि सार्वजनिक स्थान चिया पसल, क्यान्टिन, सार्वजनिक यातायात जतातै ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’को अलि बढी चर्चा सुनिन्छ । तर, वास्तविक रुपमा हेर्ने हो भने अहिले पनि ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ को तुलनामा ‘नेपाल आइडल’ कै क्रेज धेरै रहेको पाउन सकिन्छ । नेपाल आइडल पूर्णतया इन्डियन आइडलबाट प्रभावित छ त्यसैले धेरै पहिलेदेखि इन्डियन आइडल हेर्दै आएका मानिसहरुले समेत नेपाल आइडललाई बढी महत्व दिन्छन् । अर्को कुरा नेपाल आइडलले प्रत्यक्ष जनतासम्मै पुगेर कन्टेष्टेन्ट छान्ने भएकाले उसको ग्रास रुटका नागरिकहरुसँग समेत भावनात्मक सम्बन्ध कायम भएको छ । यो बिषयमा ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ पूर्णतया चुकेको छ । यसले ठाँउठाँउमा पुगेर अडिसन गर्नु भन्दा पनि प्रविधि मार्फत कन्टेष्टेन्ट छान्नुपर्ने भएकाले प्रविधिसँग जानकार तथा अझै भन्ने हो भने शिक्षित मानिसहरु मात्रै ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ सँग जोडिने सम्भावना धेरै देखिन्छ ।
एक त नेपालमा प्रविधि चलाउन जान्नेहरुको संख्या कम नै छ । त्यसैले नेपाल आइडल प्रविधि जानेका र नजानेका दुबैका लागि रोजाई बन्न सक्छ भने द भ्वाइस अफ नेपाल केवल जानेका बुझेकाहरुका लागि मात्रै रोजाईमा पर्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । त्यसैले अहिले पनि तुलनात्मक रुपमा नेपाल भरको कुरा गर्दा नेपाल आइडल कै क्रेज बढी पाउन सकिन्छ । जे भए पनि यस्ता कार्यक्रमले लुकेर बसेका प्रतिभालाई अंकुराउने मौका पक्कै दिन्छन् । त्यसैले दुबै रियालिटि शो ले राम्रो र उत्कृष्ट प्रतिभा छान्न सकुन हाम्रो शुभकामना !!!!!!!